डोनाल्ड ट्रम्पको ‘सेक्स भिडिओ’ राखेर रूसले अमेरिकालाई आफ्नो इशारामा चलाएकै हो ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘सेक्स भिडिओ’ राखेर रूसले अमेरिकालाई आफ्नो इशारामा चलाएकै हो ?
एजेन्सी– नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘सेक्स भिडिओ’ रूससंग भएको हल्ला बाहिरिएको छ । ट्रम्पको सपथ ग्रहणको दिन नजिकिदै गर्दा अमेरिकी जासुसी संस्थाले पत्ता लगाएको यो कुरा स्वयं ट्रम्पलाई पनि जानकारी दिएको बताइएको छ ।
ट्रम्पले भने यो समाचारलाई झूठ भएको बताएका छन् । अमेरिकी जासुसी संस्थालाई बेलायती जासुसी संस्थाले यसको प्रमाण दिएको बताइएको तर ट्रम्पले समाचार गलत भएको बताएका छन् । ट्रम्पको आश्चार्यजनक गोप्य भिडिओ आफसँग छ भन्दै ‘रूसी जासुसले ट्रम्पलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कुरा बताएको अमेरिकी जासुसले भनेका छन् ।
मस्कोको एक होटलमा ट्रम्पले केही वेश्याहरूसंग शरीरिक गतिविधि गरिरहेको भिडिओमा प्रष्ट देख्न सकिने बताइएको छ । यता ट्रम्पले उक्त समाचारलाई झुट भनेपनि यो खबर संसारभर फैलिइसकेको छ ।ट्रम्पलाई यही भिडिओ देखाएर रूसले कयौं सम्झौतासमेत गरिसकेको बताइएको छ ।
कोरियामा कुकुर नमार्न अदालतको आदेश
सोल, ७ असारः दक्षिण कोरियाको एक अदालतले मासुका लागि कुकुर नमार्न आदेश दिएको छ ।
वासिङ्टन, ७ असारः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासी नीतिप्रति केही लचिलो हुनुभएको समाचार छ ।
युद्धविराम सकिएलगत्तै अफगानिस्तानमा हिंसा भड्किदा ५९ सुरक्षाकर्मी र १६ तालिबान मारिए
अफगानिस्तान, ७ असारः अफगानिस्तानमा युद्धविराम सकिएलगत्तै हिंसा भड्किएको समाचार छ । अफगानिस्तानका उत्तरी र पश्चिमी
बन्दुक देखाएर १४ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, बलात्कारको भिडियो बनाए
काठमाडौं । भारतको युपीमा एक १४ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । युपीको मुजफ्फरनगरकी
डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन लगत्तै नाम फेरियो न्युरो अस्पतालको
New teej song recording of Mina Dhakal
कुखुराको मासु खानेहरुलाई दुःखद खबर, डरलाग्दो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
सन्दर्भ विश्वकप : रसियाका वेश्याहरुले काला जातिका पुरुषसँग सेक्स गर्न मानेनन्, कारण यस्तो अनौठो